လူမှုမီဒီယာနှင့်ကျွန်ုပ်၏နာမည်ကိုဘယ်လိုဖျက်စီးခဲ့ပုံ ... ပြီးတော့အဲဒါကနေသင်လေ့လာသင့်တာတွေ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2021 အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 2021 Douglas Karr
ငါကိုယ်တိုင်သင့်ကိုတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သည်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ခင်ဗျားကိုလူကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှမတွေ့ဖူးဘူးဆိုရင်၊ ငါဟာလူမှုမီဒီယာတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးမင်းငါ့ကိုဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတာငါကြောက်တယ်။
ငါအသည်းအသန်လူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေးအကြောင်းအသည်းအသန်ရှိသည်။ အဲဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုလုံးဝသဘောကျတယ်။ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဘယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့မဆိုကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ရခဲ့တယ်။ ငါအဖြစ်အမှန်တကယ်စပ်စုမိပါတယ် အဘယ်ကြောင့် လူတွေဟာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုယုံကြပြီးငါဘာကြောင့်ငါယုံကြည်တာလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြကြတယ်။
ကျွန်တော့်အိမ်မှာကြီးပြင်းလာတာကမတူကွဲပြားပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ လိင်၊ တိမ်းညွတ်မှု၊ လူမျိုးရေး၊ ကြွယ်ဝမှုစသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်အဖေသည်စံထားလောက်သောရိုမန်ကက်သလစ်ဖြစ်သည်။ သူကဘယ်သူမဆိုပေါင်မုန့်ဖုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကြိုဆိုခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့အိမ်ကအမြဲတမ်းပွင့်လင်းပြီးစကားစမြည်ပြောဆိုမှုတွေကအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးပေမယ့်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးစားမှုရှိခဲ့တယ်။ ငါမဆိုစကားပြောဆိုမှုကြိုဆိုတဲ့အိမ်မှာကြီးပြင်းလာတယ်။
လူများနှင့်ပေါင်မုန့်ကိုဖဲ့နိုင်သည့်သော့ချက်မှာသင်သူတို့ကိုမျက်လုံးကြည့်ပြီးသူတို့စားပွဲသို့ခေါ်ဆောင်လာသည့်စာနာခြင်းနှင့်နားလည်မှုကိုသူတို့အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဘယ်မှာကြီးပြင်းလာသလဲ၊ သူတို့ဘာကြောင့်သူတို့ဘာကြောင့်ယုံကြည်တာလဲဆိုတာကိုသင်နားလည်နိုင်ပါတယ်၊
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူသည်းခံခဲ့ပါကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်လိုသောကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုသင်မြင်တွေ့ရကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ တကယ်လို့များသင်ဟာနေရာတကာမှာရှိနေသေးရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ထဲကို ၀ င်မလာဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုများတည်ဆောက်ရန်နှင့်အခြားသူများကိုပိုမိုနားလည်ရန်အခွင့်အရေးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်ခုန်ချခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ရေကန်ငယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာငါ့ကိုစကားပြောမယ်၊ ငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါကြားဖူးပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းမှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထည့်မယ်ဆိုရင်မင်းကမင်းကိုအွန်လိုင်းနဲ့လည်းချိတ်ဆက်မိမှာပဲ ကျွန်ုပ်၏လူမှုမီဒီယာလိုင်းများသည်ပွင့်လင်းသောစာအုပ်ဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေး၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ၊ အားလုံးဆက်သွယ်မှု၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူ။
ငါဒီ post ရေးဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါငါတကယ်ရေးချင်တယ် လူမှုမီဒီယာကကျွန်ုပ်၏နာမည်ကိုပျက်စီးစေပုံဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်လိုစိတ်ပြင်းပြသူပါ။
တွဲဖက်များကသတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုအသည်းအသန်ငြင်းခုံနေကြသည့်အခြားအခန်းတစ်ခန်းမှကြွေးကြော်သံအချို့ကြားရသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်အခန်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်၊ အခြေအနေကိုနားမလည်၊ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏နောက်ခံကိုမသိ၊ သင်၏ငေါ့သောအမြင်ကိုကြွေးကြော်သည်။ ရှေးရှေးအနည်းငယ်က၎င်းကိုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်သော်လည်းလေ့လာသူအများစုသည်သင့်ကိုလူရှုပ်နေသူဟုသာထင်ကြလိမ့်မည်။
ငါလူရှုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျော်, ထပ်ခါထပ်ခါ။
ဒီပြcompoundနာကိုပိုဆိုးစေဖို့အတွက်ဖေ့စ်ဘွတ်လိုပလက်ဖောင်းတွေကအရမ်းပြင်းထန်တဲ့အငြင်းပွားမှုတွေနဲ့အတူအကျယ်ဆုံးအခန်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ထိုအခါငါဂယက်ရိုက်၏ရိုးရိုးသားသားမသိဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်မှုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်နောက်ယခုတွင်ကမ္ဘာကြီးသည်အခြားသူများနှင့်အဆိုးဆုံးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လူသားတစ် ဦး ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးကူညီသူတစ် ဦး အကြောင်းပုံပြင်ကိုမျှဝေသည့်နောက်ဆုံးသတင်း (#goodpeople tag) ကိုကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ရှုထောင့်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ခန့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အခြားပရိုဖိုင်း၏နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းကိုဆန့်ထုတ်လိုက်လျှင်ရာနှင့်ချီ။ ရပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိသတ်အများစုသည်ငါ၏တစ်ဖက်တည်းကိုသာတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ပြီးတော့လူမှုရေးမီဒီယာကကျွန်တော့်ရဲ့အဆိုးဆုံးအပြုအမူကိုပဲ့တင်ထပ်နေရတာပါ။ သူတို့ကဒါခေါ်ပါ စေ့စပ်ထားခြင်း.
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ချို့တဲ့သောအရာသည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုဖြစ်သည်။ ငါမှတ်ချက်ပေးကမ်းနှင့်ငါအမှန်တကယ်ယုံကြည်သော၏ဆန့်ကျင်ဘက်တံဆိပ်ခတ်ခဲ့သမျှသောကာလပတ်လုံးသင်တို့ကိုငါမပြောနိုင်ပါ။ လူမှုမီဒီယာတစ်ခုချင်းစီသည်အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်တိုက်ခိုက်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောပရိသတ်နှစ်မျိုးလုံး၏တွန်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊
မည်သည့်ယုံကြည်မှုစနစ်တွင်မဆိုအခြေအနေသည်အရေးကြီးသည်။ ကလေးများသည်မိဘများကဲ့သို့တူညီသောယုံကြည်ချက်များနှင့်ကြီးပြင်းလာရသည့်အကြောင်းရင်းရှိသည်။ အဲဒါ .... မဟုတ်ဘူး အချစ်ရေးသူတို့ကနေ့တိုင်းသူတို့ပညာတတ်ပြီးသူတို့ချစ်ခင်လေးစားရသူတစ်ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာကအတော်လေးစာသားပါပဲ။ ထိုယုံကြည်မှုကိုအချိန်နှင့်အမျှထောင်နှင့်ချီသောရာပေါင်းများစွာမှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကအပြည့်အဝထောက်ခံသည်။ ထိုယုံကြည်ချက်ကိုအထောက်အကူပြုသောအတွေ့အကြုံများနှင့်ထိုယုံကြည်မှုများကိုပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲသောအရာ - ပြန်လှည့်ရန်ခက်ခဲသောအရာ။
ဒီနေရာမှာအမုန်းတရားအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင်လည်းသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ငါဟာမြင့်မားတဲ့အာဏာကိုယုံကြည်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ အစိုးရရဲ့အခန်းကဏ္,၊ ကြွယ်ဝမှု၊ စီးပွားရေးစတဲ့အရာတွေလိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေကိုပြောနေတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က၏ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ၎င်းကိုလေးစားသင့်သည်၊ သို့သော်လူမှုရေးမီဒီယာတွင်မကြာခဏမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်မကြာခဏသုံးသောဥပမာတစ်ခုမှာစီးပွားရေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ အရွယ်အထိ ၀ န်ထမ်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်လူအများအားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းအထိကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်စိန်ခေါ်မှုများအားလုံးကိုအမှန်တကယ်မသိခဲ့ပါ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ အကူအညီကန့်သတ်ချက်၊ စာရင်းအင်း၊ ငွေသားစီးဆင်းမှုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခြားတောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ပါ။ ရိုးရှင်းသောအရာများ။ ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ငွေတောင်းခံလွှာများကိုမကြာခဏပေးလေ့ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှအလုပ်မလုပ်သောအခြားသူများကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးနေသည်။ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုလုပ်ကိုင်ရန် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုလအနည်းငယ်အကြာတွင်“ ငါဘယ်တော့မှမသိဘူး” ဟုပြောခဲ့သည်။ အမှန်မှာသင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏ဖိနပ်ထဲသို့ဝင်သည်တိုင်အောင်သင်သာလျှင်ဖြစ်သည် ထင် သင်သည်သူတို့၏အခြေအနေကိုနားလည်သည်။ အဖြစ်မှန်ကတော့သင်အဲဒီမှာမရောက်မချင်းတက်လိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏နောက်သို့လိုက်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းတွင်စေ့စပ်။ ထင်မြင်ချက်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏မျှဝေခြင်းနှင့်အကျင့်များသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းများဆုံးရှုံးခြင်း၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောမိသားစု၏ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်…ဟုတ်ကဲ့…စီးပွားရေးကြောင့်ပင်ဆုံးရှုံးခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ရှေ့ဆက်သွားရန်အကြံဥာဏ်ဒီမှာ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိ algorithms သည်ကျွန်ုပ်အမြင်တွင်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်မှာငါ ၇၀၀၀ နီးပါးရှိခဲ့တယ် မိတ်ဆွေများ ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်အရောင်အသွေးစုံသောအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည်အဆင်ပြေသော်လည်းလူ ၇,၀၀၀ လုံးအတွက်ကျွန်ုပ်၏အဆိုးဆုံးနောက်ဆုံးသတင်းများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါမျှဝေအပြုသဘောဆောင်တဲ့ update များ၏အရေအတွက်ကိုလွှမ်းမိုးအဖြစ်ကရွားလှဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မိတ်ဆွေများ ရိုးရှင်းစွာသတ္တုတွင်း၏အပြင်းထန်ဆုံး, ရွားလှ, ငေါ့ updates များကိုမြင်တော်မူ၏။
ငါ Facebook ကိုသူငယ်ချင်း ၁၀၀၀ ကျော်လောက်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးအဲ့ဒီ့အရေအတွက်ကိုဆက်လက်လျှော့ချသွားမှာပါ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ယခုငါအရာအားလုံးကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်သကဲ့သို့ပြုမူသည်။ ကျွန်ုပ်အမှတ်အသားပြုသည်ဖြစ်စေမသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏ Facebook သည်ကျွန်ုပ်၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ အခြားလူတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးကိုလည်းငါမြင်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိချင်တယ်။ သူတို့လူကောင်းကိုအမှန်တကယ်ကြည့်ရှုရန်သူတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုမကြာခဏနှိပ်လိမ့်မည်။
ငါသည်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Facebook ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပါတယ်။ သင့်အတွက်ပြုလုပ်ရန် Facebook algorithms ကိုတည်ဆောက်ထားသည် အခပေး သင့်ရဲ့စာမျက်နှာမွမ်းမံချက်များကိုမြင်နိုင်ရန်နှင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဆိုးဝါးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်အားလုံးအားဆုတ်ဖြဲပစ်ခဲ့သော်လည်းသူတို့၏နောက်လိုက်များထံမှပို့စ်များကိုပေးခဲ့သည်။ သူတို့အသိုင်းအဝိုင်းကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းရာ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံးဝဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာစီးပွားရေးပိုလုပ်နိုင်မလားငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ငါကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှင့်စီးပွားရေးမစွန့်စားလိုသောအရာများ - လွယ်ကူလွန်းလှသည်။
မည်သူနှင့်မှဆက်သွယ်ခွင့်မရသေးပါ LinkedIn တို့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအဲဒီမှာငါ့စီးပွားရေး၊ ငါ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေနဲ့ podcasts တွေကိုမျှဝေမှာပါ။ ငါတခြားသူတွေအဲဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေး updates များကိုမျှဝေမြင်ကြပြီကြောင့်ဆန့်ကျင်အကြံပေးလိမ့်မယ်။ သင်က boardroom ထဲကိုဝင်ပြီးလူတွေကိုအော်ငေါက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ LinkedIn မှာမလုပ်နဲ့။ ၎င်းသည်သင်၏အွန်လိုင်းဘုတ်အဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ထိုကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုသင်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။
ကျေးဇူးတင်စရာ၊ Instagram ပေါ်တွင်ဆွေးနွေးမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်သို့မဟုတ်လုံးဝမရှိပါ။ အဲဒီအစားသူကတစ် ဦး အမြင်ပါပဲ ငါ့ဘဝ ငါဂရုတစိုက် curate နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူမျှဝေချင်တယ်။
Instagram တောင်မှတောင်ကျွန်တော်သတိထားရမယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ bourbon စုဆောင်းမှုကလူတွေဟာငါနဲ့အရက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောင့်ငါနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ရတယ် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ Instagram ကို“ ကျွန်ုပ်၏ bourbon စုဆောင်းမှု” ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်စုဆောင်းထားသည့် bourbons တန်းများသည်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သျောလညျး, ငါ့စာမျက်နှာငါ့ကိုဖြစ်ပါတယ် ... ငါ့ဖော်ပြချက်အသက် 50 ကျော်ဘဝဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့, bourbon pics များလွန်း, လူတွေကငါအရက်မူးထင်ပါတယ်။ Oy ။
ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ Instagram ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်၏မြေးအသစ်၏ဓာတ်ပုံများ၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုဂရုတစိုက်အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြခြင်းများကိုတမင်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရှေးရှေးတုန်းက Instagram ဟာတကယ့်ဘဝမဟုတ်ဘူး။ ငါအဲဒီလိုလုပ်မယ်။
ငါပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဝေမျှ ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာ အကောင့်ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တ ဦး တည်းရှိသည် Martech Zone နှင့် DK New Media ငါတင်းကြပ်စွာအစိတ်အပိုင်း။ ငါအခါအားလျော်စွာလူတွေကိုခြားနားချက်ကိုသိစေ။ သူတို့ကိုငါသိစေချင်တယ် Martech Zoneတွစ်တာအကောင့်ကကျွန်တော်ပဲ။ ဒါပေမယ့်ထင်မြင်ချက်မပါပဲ။
တွစ်တာအကြောင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်သည်မှာ algorithms များသည်ကျွန်ုပ်၏အငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံးတွစ်များထက်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မျှတသောအမြင်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့…တွစ်တာမှာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေကစာရင်းဇယားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ငါကတွစ်တာမှာအများဆုံးဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့စကားဝိုင်းတွေရှိတယ်။ ပြီးတော့ကြင်နာတဲ့စကားလုံးနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်လာတဲ့စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းကိုကျွန်တော်မကြာခဏဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူး။
တွစ်တာသည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်များကိုစွန့်လွှတ်ရန်အတွက်ခက်ခဲသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပရိုဖိုင်းတစ်ခုလုံး၏စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုလုံးအတွက်အခြေအနေမှဖယ်ထုတ်လိုက်သောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ငါအရင်ကထက်တွစ်တာမှာငါဘာဝေမျှသလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်ပိုပေးတယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တင်ပို့ချက်ကို Publish မနှိပ်တော့ပါ။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှခေါင်းဆောင်များအားလေးစားတန်ဖိုးထားသောလူမှုမီဒီယာတွင်ဘယ်သောအခါမှရပ်တည်ရန်မလုံလောက်သောစည်းကမ်းရှိသောလေးစားမှုကိုခံရသည်။ အချို့က၎င်းသည်သူရဲဘောနည်းသည်ဟုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တုို့အွန်လိုင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်နေသောယဉ်ကျေးမှုကိုဝေဖန်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်ခြင်းကိုခံယူခြင်းထက်သင်၏ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားရန်သတ္တိရှိဖို့လိုသည်။
အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ကတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတင်ပြခြင်း (သို့) အခြေအနေမှဖယ်ထုတ်ခြင်းများကိုဘယ်တော့မှမဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါရလေလေ၊ ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးထွားလာတယ်၊ စားပွဲဝိုင်းမှာဖိတ်ခေါ်ခံရတယ်၊ သူတို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာလူကြိုက်များလာတာကိုငါများများတွေ့ရလေလေ။
ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသူ၊ ကျွန်ုပ်၏သနားခြင်းကရုဏာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရဖူးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ရက်ရောမှုနှင့်ထိတွေ့ဖူးခြင်းမရှိသူများကိုကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးကွာစေခြင်းမှာရိုးရှင်းပါသည်။ အဲဒီအတွက်နှစ်တွေတစ်လျှောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကျွန်တော်မျှဝေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနောင်တရမိတယ်။ ငါလူအများစုဆီသို့ဆက်သွယ်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတောင်းပန်ပြီးကော်ဖီသောက်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးသိကျွမ်းလာအောင်ဖိတ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏လူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်းကသူတို့ဖော်ထုတ်ခဲ့သောဆိုးသွမ်းသောရုပ်ပြောင်ကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်အားမည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုမြင်စေလိုသည်။ မင်းကအဲဒီလူတွေထဲကတစ်ယောက်ဆိုရင် ... ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ပါငါမီအောင်လိုက်ချင်ပါတယ်
မှတ်ချက် - ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးပါပြီ။ မှတ်ချက်တစ်ခုကထိုတွင်အားလုံးပါဝင်ခွင့်မရှိခြင်းကိုမှန်ကန်စွာထောက်ပြခဲ့သည်။
Tags: douglas karrFacebook ဂုဏ်သတင်းinstagram ဂုဏ်သတင်းlinkedin ဂုဏ်သတင်းအွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းဂုဏ်သရေလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာဂုဏ်သတင်းtwitter ဂုဏ်သတင်း
accessiBe: ဆိုက်သုံးစွဲနိုင်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန် Artificial Intelligence ကိုအသုံးပြုခြင်း
22:2021 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 4, 47 တွင်
နိုင်ငံရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှု၊ လူမျိုးရေး၊ ကြွယ်ဝမှုစသည်တို့ပါဝင်သည်။
သင်ပိုမိုနှစ်သက်သည်ထက်လိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုကိုအသုံးပြုပါကသင့်ကို ပိုမို၍ ပိုမို၍ ပါဝင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လိမ့်မည်။ ငါတို့ဟာဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်တဲ့၊ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပဲ။
23:2021 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 46
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောအချက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားသည်မှာသေချာသကဲ့သို့အသစ်ပြောင်းမည်။
23:2021 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 26
ငါသည်သင်တို့ကိုဤရေးသားခဲ့သည်တကယ်ပဲချစ်ကြတယ်။ ဒါဟာသင်အမှန်တကယ်ဘာမှမသင်ယူကြောင်းပြသထားတယ်။ မင်းရဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီတွေ၊ မုန်းတီးမှုတွေ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ရန်သူမဟုတ် (သင်ထောက်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း) တကယ်တော့သင်ဟာမုန်းတီးသူတစ် ဦး သာဖြစ်သည်။ ဂျပန်တွင်ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုယိုစိမ့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍“ သူတို့ကိုဂေါ်ရီလာကော်” ရအောင်သင်တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောခဲ့တာကိုသတိရပါ။ ငါမှတ်မိတယ်၊ သင်၏ဂုဏ်သတင်းသည်ဤလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်ရှိနေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါ။
23:2021 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 44
Zack, သင့်မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ဖောက်သည်များနှင့်သူငယ်ချင်းများကမင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသကဲ့သို့ငါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးနှင့်လူမှုမီဒီယာအပေါ်အမြင်ကိုထောက်ခံသည်ဟုထင်ပါသည်။ ငါကောင်းကောင်းလိုချင်ပါတယ်
26:2021 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 1, 22
အလို! ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုပိုမိုသတိပြုသင့်သောအရာများကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသောအလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။ သို့သော်သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်နှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဟန်ချက်ညီစေရန်ကြိုးစားခြင်းသည် ပို၍ ပင်စိန်ခေါ်မှုနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုပင်ဖြစ်သည်။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကစတင်ခဲ့ပုံရသည်၊ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိကော်ဖီဆိုင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိကော်ဖီခွက်များစွာ ငါဟာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းအရဝေးကွာလွန်းတဲ့အတွက်ငါနောင်တရမိတဲ့ကော်ဖီစီးတီးနေ့ကငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်သင့်ဘူး၊ ငါတို့ကော်ဖီတွေ၊ ဆွေးနွေးမှုများ၊ အငြင်းအခုန်များ၊ တစ် ဦး ထက်ပိုသောပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာ။
26:2021 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 57 တွင်